နေ့တာအရှည်ဆုံးနေ့မှာ သန်းခေါင်ယံနေ ဆီ ခရီးသွားခြင်း ~ Htet Aung Kyaw
Posted in: LIFE IN MEDIA,TRAVEL,VIDEO
အရှည်ကိုဖတ်ချင်ပါက Links ဟောင်းသို့ သွားရန်...
June 21, 2014 at 1:53 AM Reply
သစ်ထူးလွင် Site မှာရေးထားတဲ့ Comment တချို့ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်...
Naing Aung · Gazatted Officer at ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ
Incredible view ! Woo , I assume that Northern Norway isafantastic Land and attractive area for many people .
Ko Thu Ko Thu · Yangon Institute of Economics
Hlaing Myint · RC2 YANGON
Thank you. I was in Norway in June 2012 for3days but I didn't get the chance to see that view.
Sint Sint Nwe · Institute of economic
very wonderful & thank to see like this view. could u please more share like this view.
ကြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ထားဝယ်သား ကိုထက်အောင်ကျော်
ဒါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄-၅ နှစ်ကရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးပါ။... အခု ၂၀၁၇ မှာတော့ ထုိုင်းအပြင် မြန်မာနုိုင်ငံက ခရီးသည်တချို့တောင် နေမ၀င်အရပ်နဲ့ မြောက်ပုိုင်းရောင်ချည်ကိုကြည့်ဖုို့ နော်ဝေးနဲ့ ဥရောပဆီ လာလည်နေကြပြီလုို့ မိတ်ဆွေတဦးကပြောပါတယ်။ ...တကယ်လုို့စိတ်ဝင်စားရင် ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ tour ကုပဏီတွေကနေတဆင့် သူ စီစဉ်ပေးနုိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ...မြန်မာအများစုဟာ ဥရောပခရီးလုို့ ပြောရင် ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ ဂျာမဏီ (အင်္ဂလန်က ဗီဇာခက်တယ်ဆုို၊ ကျန် နုိုင်ငံတွေက ရှန်ဂန်ဗီဇာနဲ့ရ) သာသွားလေ့ရှိပြီး ဒီလုို သဘာဝအလှတွေဆီ သွားလေ့မရှိဘူးဆုိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ဒီဖက်ကုိုလာလည်ဖုို့ မြန်မာ ရီးသွားတွေ စိတ်ဝင်စားနေတယ်လုို့ ဥရောပရောက် မြန်မာခရီးသွားတွေကို ၀န်ဆောင်မှုပေးနေသူ tour guide တဦးကလဲပြောပါတယ်။ ။